झगडा परे पनि करणले आफ्ना सन्तानको पहिलो फोटो काजोललाई नै किन पठाए ? | Lifemandu
झगडा परे पनि करणले आफ्ना सन्तानको पहिलो फोटो काजोललाई नै किन पठाए ?
| बिहीबार, २६ असोज, २०७४
एजेन्सी । कुनै समयका अति मिल्ने साथी बलिउड निर्माता तथा निर्देशक करण जोहर र अभिनेत्री काजोलबीच अहिले सुमधुर सम्बन्ध नरहेको भारतीय सञ्चारमाध्याले जनाउँदै आएको छ ।
करण जोहर निर्देशित फिल्म ‘ए दिल है मुश्किल’ र अजय देवगन अभिनित फिल्म ‘शिवाय’ रिलिज भएदेखि करण र काजोलबीचको सम्बन्धमा फाटो आएको हो ।
केही समयअघिमात्र करण जोहर सेरोगेसीको मद्दतबाट जुम्ल्याहा बच्चाका बाबु बने । तर, बच्चाहरुको पहिलो फोटो करणले कसलाई पठाए तरु बलिउड अभिनेत्री नेहा धुपियासँगको एक टक सोमा करणले भने, ‘बच्चा जन्मने समयसम्म पनि यो कुरा कसैलाई थाहा थिएन । बच्चा जन्मिएपछि मैले पहिलो सन्देश नै काजोललाई पठाए ।
काजोललाई मेरो मेसेजको प्रतिक्रिया दिनु पर्दैन भन्दै मैले भने की, म तिमीले मेरा बच्चाहरुको फोटो कुनै पनि टिभी या अनलाइनमा देखेको हेर्न चाहन्न । मेरा बच्चाहरु कस्ता छन् भनेर म आफैँ तिमीलाई देखाउन चाहन्छु ।
यती भनेर मैले बच्चाहरुको फोटो उसलाई पठाएँ । उसले पनि तुरुन्तै म्यसेजको प्रतिक्रिया दिँदै बच्चाहरु निकै नै सुन्दर भएको र मेरा बच्चाहरुले पनि मलाई उसका छोराछोरी उसलाई दिएकोजस्तै भरपूर माया दिउन् भन्ने आशा राखेको बाताइन्।
’करण र काजोलले एकसाथ ‘कुछ कुछ होता है’, ‘माइ नेम इज खान’, ‘कभि खुशी कभी गम’ जस्ता थुप्रै सुपरहिट फिल्ममा एकसाथ काम गरेका छन् ।
एजेन्सी । आजभोलि ‘बोल्ड फोटो शूट’ गराउनु सामान्य भइसकेको छ । हरेक चर्चित पत्रिकाको कभर पेज अभिनेत्रीहरुको बोल्ड फोटोले भरिएको हुन्छ । तर यस्तो फोटो शूट ६७ वर्ष पहिले कस्तो थियो ? के तपा
जंगबहादुर शैलीमा सुरक्षा निकायमा धम्की : कानुनमा छैन 'कारबाही'
काठमाडौ, २७ साउन । सुरक्षा निकायमा हालै बढुवा भएका अधिकृतहरुले सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट गरेपछि सुरक्षा निकायको माथिल्लो निकायले फोटो किन हालेको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि अहिले ती सुर
मेस्सीले पठाए नेइमारलाई यस्तो ‘इमोशनल’ म्यासेज,
पुस ७ । बार्सिलोना तथा अर्जेन्टिनाका स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीले आफ्ना पूर्व टिम–मेट नेइमारलाई इमोशनल म्यासेज पठाएर बार्सिलोना र व्यक्तिगत रुपमा आफूले निकै सम्झिरहेको बताएका छन् ।